Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra 2021 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra, 2021
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2943 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Oktobra, 2021
Nampahafantarin'ilay tanora mpikatroka Azerbaijaney ampahibemaso ny heloka bevava nihatra taminy ary mbola mandehandeha ny nahavanon-doza
Azia Afovoany sy Kaokazy 21 Oktobra 2021
Na dia naseho aza ny porofon'ny heloka, mbola mandehandeha ny nahavanon-doza, araka ny kaonty manokana navoakan'ilay mpikatroka Sanay Yaghmur ao amin'ny Facebook.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Oktobra 2021
Efa ho telopolo taona taty aoriana, mieritreritra ny hanokatra ny sisin-taniny miaraka amin'i Armenia i Torkia. Nikatona nanomboka ny taona 1993 ny sisintany.
Azia Atsimo 13 Oktobra 2021
Srijana Singh Thakuri ao amin'ny ekipa nasionaly baolina kitra vehivavy ao Nepal: Tsy maningana ny tantarako. Izany no mitranga rehefa omena vintana, hirika sy andaniam-bola karakarana ny zazavavy sy ny vehivavy.
Azia Atsinanana 08 Oktobra 2021
Niverina ilay shinoa zatra manoratra Chen Qiushi. Saingy mbola tsy hita ireo olom-pirenena hafa zatra manoratra nitatitra momba ny valan'aretina COVID-19 tany Shina. Anisan'izany i Zhang Zhan voaheloka higadra efa-taona.
Azia Atsimo 07 Oktobra 2021
Namoy ny ainy tamin'ny 25 septambra 2021 tao New Delhi, India i Kamla Bhasin, mpisavalalana ny hetsika zon'ny vehivavy any Azia atsimo. Nahatsiaro azy tao amin'ny media sosialy ireo mpikatroka ary nisaona ny fahafatesany.